Inona no lamaody - mpanao lalàna lamaody, inona ny tsipìka, fironana, mandoto, mast hev, makrotrendy, fanangonana capsule?
Ny lamaody - amin'ny inona no nanombohan'ny tantaran'ny lamaody sy ny fomba, ny lamaody vehivavy maoderina
Ny fanontaniana, inona no lamaody, dia misy vehivavy maro. Fantatry ny rehetra fa ny fiovan'ny toetr'andro dia miova ho an'ny kiraro, akanjo sy ny manika, ary miezaka ny manaraka azy ireo isika. Na dia izany aza, vitsy amin'ireo vehivavy tsara tarehy no mahatakatra ny hevitr'io hevitra io, ary avy aiza no misy azy avy amin'ny tantarany.
Mba hamaliana ilay fanontaniana, tsy dia mora ny nanombohan'ny tantaran'ny lamaody. Ny akanjo amidy misy ny solontenan'ny solontenan'ity na ny sivilizasiona ity dia efa nisy hatramin'ny ela, tamin'izany fotoana izany, tamin'izany fotoana izany, ny olona dia tsy nieritreritra ny fomba fitafiana tsara sy mahafinaritra. Ho azy ireo, ny akanjo akanjo dia fomba iray ihany ny fihazonana hafanana ary ny manafina toerana tsy hialana amin'ny maso. Na inona na inona novolavola na akanjo ivelany dia hita "amin'ny bayonets", ka tsy nisy faniriana hanova na hanova zavatra.
Tantara momba ny fiandohan'ny lamaody
Mino ny manam-pahaizana fa tamin'ny taonjato faha-XIV dia nanomboka ny tantaran'ny lamaody sy ny endriny. Ny toerana niorenan'ireny foto-kevitra ireny dia antsoina hoe renivohitr'i Frantsa, Paris, na dia nalain'ireo mponina tany Eorôpeana avy hatrany aza izy ireo. Ireo solontenan'ny firaisana ara-drariny dia nanomboka naneho ny fisainana ary niezaka ny tsara indrindra mba hipoitra avy amin'ny vahoaka, mamorona ho an'ny tenany ho hatsikana marevaka na firavaka tena izy. Ny solontenam-panjakana mazava indrindra tamin'izany fotoana izany dia ny "satroka amin'ny tandroka", izay fanorenana vita amin'ny lamba, izay ahitan'ny kesika amin'ny fomba manokana.
Amin'ny hoavy dia nanomboka niova ny foto-drafitr'ireo akanjon'ny vehivavy tamin'ny vanim-potoana vaovao. Noho izany, amin'ny fanombohan'ny andro mangatsiaka, vehivavy tsara tarehy mitafy volom-borona, ary amin'ny fahavaratra - amin'ny vokatra vita amin'ny sehatra voajanahary. Nanomboka niova tsikelikely ny fiovan'ny zavatra tao am-pandriana - nanjary saro-bidy kokoa ny modely sasany noho ny teo aloha. Misy ireo fanta-daza sy fanta-daza amin'izao fotoana izao, izay mahatonga ny sarin'ny vehivavy lamaody mahafinaritra sy mamitaka.
Na dia tany Frantsa aza ny tantaran'ireo lamaody vehivavy, ny mpanao lalàna lehibe indrindra nandritra ny taonjato roa nifandimby dia Italia, na maromaro kokoa, an'i Venise. Ny hatsaran-tarehy Venetiana dia mametraka ny feony ho an'ny akanjo sy ny volom-borona, manolotra volon-doko sy volo ho an'ny fironana, mandinika manokana ny accessories. Noho izany, efa tamin'ny taonjato faha-XV, ny ankamaroan'ny zatovovavy dia manao ny akorandriaka tsara indrindra sy ny voaly volom-borona izay mamaritra ny tarehiny.
Fotoana vitsy taty aoriana, nanomboka tamin'ny tapaky ny taonjato faha-16, dia nanjary mpandehandeha ny Espana. Ireo Espaniôla Pranky dia mampiroborobo ny akanjo marevaka sy madio - akanjo miaraka amin'ny satroka maty, lava lava sy angom-bolamena mafy. Ny ankilany dia be lava sy lava, ary tsy misy tapaka na ratra asymmetrika manambara ny sofina mihetsiketsika amin'izao fotoana izao. Mandritra izany fotoana izany dia manana fomba vaovao entina hamitahana ny lehilahy ny tovovavy - ireo karazana fofona rehetra dia nanjary lamaody, nanome ny mpampiasa ny sarin'ny mistery sy ny firaisana ara-nofo.
Farany, tamin'ny taonjato XVII, ny lamaody dia notononin'ny firenena tompon'andraikitra amin'ny fisehoany - Frantsa. Ny Parisiana dia heverina ho toy ny fanindrahindrana ankapobeny amin'ny ankapobeny - mihoatra ny roan-jato taona. Nandritra io fotoana io, niova imbetsaka ny fironana, saingy nankatò tanteraka ny hevitry ny Parisiana ny vehivavy rehetra manerana izao tontolo izao ary nanoratra tamim-pifaliana ny akanjon'izy ireo, ary tsy nanampy azy ireo mihitsy.
Hatramin'ny taonjato faha XX dia tsy nitsaha-fanjakana ny mpanao lalàna momba ny fironana. Ny tranon'izy ireo no toeram-ponenany, izay nahazoana tombontsoa maro be. Nipoitra manerana izao tontolo izao ny anarana marika, ny sasany amin'izy ireo dia mbola velona nandritra ny taona vitsivitsy, fa ny sasany kosa dia efa ela no niandry ny Olympus lamaody. Hatramin'izao, ireo stylista malaza, ireo mpanao lalàna lamaody dia niparitaka nanerana ny kaontinanta rehetra, fa ny ankamaroan'ny fanao dia mbola mifantoka hatrany amin'ireo mpiantoka frantsay sy Italiana.
Inona no lamaody sy fomba?
Raha mieritreritra ny lamaody iray, ny vehivavy sasany dia mampifangaro an'ity hevitra ity amin'ny fomba. Raha ny marina, amin'ny lamaody dia midika hoe ny fananana ara-nofo ny iray na ny iray hafa amin'ny hafa. Saiky matetika io teny io dia manondro afa-tsy amin'ny toerana iray, ohatra, distrika iray, tanàna na fanjakana, fa tsy amin'ny tontolo manerantany. Ny lamaody vehivavy maoderina dia manitatra tsy amin'ny fitafiana sy ny akanjo ihany, fa koa ny makiazy, manikika, ny volom-borona, ny fofona, ny akanjo sy ny torolàlana hafa.
Inona no lamaody avo lenta?
Ity teny ity dia niseho tao Paris tamin'ny taonjato faha XIX. Manana heviny manokana izy io - tsy mikasika ny famokarana akanjo marevaka, izay misy amin'ny ankamaroan'ny firaisana ara-drariny manerana izao tontolo izao, fa momba ny famokarana akanjo marevaka, izay tsy dia lafo loatra.
Amin'izao fotoana izao, rehefa mamaly ny fanontaniana, ny haavo dia marefo amin'ny lamaody, ny saina dia tonga ny vokatra gurus toy ny Chanel Haute Couture, Couture Atelier Versace, Gautier Paris ary ny hafa. Ny vokatr'ireo orinasa ireo dia miavaka amin'ny vidiny avo indrindra, ny fahamaroan'ny famokarana, ny kalitao avo indrindra amin'ny famokarana, ny fampiasana amin'ny asa amin'ny vato sarobidy sy ny fitaovana lafo hafa sy ny sisa.
Miaraka amin'ny fisian'ireo marika toy izany, dia nianatra ny fomba fampisehoana lamaody ny vehivavy sy ny tovovavy ary nanomboka nanatrika ny hetsika tahaka izany izy ireo. Mihamaro hatrany ny olona liana amin'ny fironana amin'izao fotoana izao, ny fironana malaza sy ny vaovao dia nanomboka niseho tao amin'ny fampisehoana rehetra. Aorian'ny fampisehoana isam-bolana, ny manam-pahaizana dia mampitaha ireo modely naseho ary mamaritra izay mety ho tian'ny tarika amin'ny fotoana manokana.
Inona ny fironana eo amin'ny lamaody?
Diniho ny lamaody maoderina, tsy azo atao ny tsy manavaka ny foto-kevitra momba ny "fironana". Azo heverina ho toy ny fironana amin'izao fotoana izao, izay tokony omena fotoana be indrindra. Amin'ny ankapobeny, tsy misy fironana intsony amin'ny tendron'i Olympus lamaody ela be - amin'ny ankabeazan'ny tranga, miaraka amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao, ny fironana rehetra amin'izany dia mamela ho any aoriana, ary ny toerany dia raisina amin'ny torolàlana vaovao. Tsy ny vehivavy rehetra no mahafantatra ary ny lamaody makotrokosa toy izany dia lamaody. Macrotrend dia manendry ny fironana rehetra amin'ny vanim-potoana ary mifandray amin'ny vanim-potoana iray, ohatra, 70 , 80 na zero.
Inona no fanangonana capsule amin'ny lamaody?
Ny fampiroboroboana sy fivarotana ny vokatra, vonona ho an'ny be ny stylists sy ny mpamorona manerana izao tontolo izao. Satria ny fifaninanana amin'io sehatra io dia avo lenta, ny solontenan'ny marika dia tsy maintsy mandeha amin'ny fomba samihafa. Matetika, marika lamaody no mamorona tahiry antsoina hoe capsule - endri-tsarobidy izay novolavolaina miaraka amin'ny mpamorona malaza na olo-malaza. Ny modela toy izany, amin'ny ankapobeny, dia tena lafo tokoa ary manintona ny mason'ny mpividy amin'ny modely hafa amin'ny marika.
Inona ny Mast Heav amin'ny Fashion?
Ao amin'ny tontolo lamaody, misy hevitra maro samihafa izay mahatonga ny vehivavy hieritreritra tsy an-kiato sy fanontaniana. Na dia ny ankamaroan'ny firaisana ara-drariny aza dia mahatakatra ny dikan'ny hoe manaraka ny lamaody, ary manandrana mampifaly an'ity ramatoa mpitaingin-tsoavaly ity amin'ny ankapobeny, tsy ny zazavavy rehetra ihany no mahatakatra hoe nahoana amin'ny fotoan-dasa manokana no tokony anaovany izany.
Raha ny marina dia maro ny fironana hita vokatry ny fanenjehan'ny lamaody amin'ny alalan'ny foto-kevitra iray, raha ny iray amin'izy ireo - ny mast of hev - dia nambaran'ny manam-pahaizana amin'ny indostrian'ny lamaody. Ao anatin'ity hevitra ity dia misy dikany manokana mifandray - midika izany ny fironana manan-danja indrindra na ny "squeak" mandritra ny fotoana iray. Amin'ny toe-javatra sasany, mbola mitohy mandritra ny taona maromaro ny hevitry ny hevitra - tsy misy fameperana amin'izany.
Inona ny tsipìka mipaoka?
Fanontaniana iray hafa azo raisina avy amin'ireo vehivavy tsara tarehy dia ny hoe "Inona ireo tongolobe am-pilalaovana?" Ity teny ity matetika dia hita ao amin'ny pejin'ny gazetiboky lamaody na avy amin'ny vavan'ny mpanara-maso ny fandaharana amin'ny fahitalavitra samihafa. Raha ny marina, tsipika iray dia mitovy amin'ny teny hoe "sary", na izany aza, tsy mitovy ny zavatra. Ho an'ny fananganana tsipìka, ny tena zava-dehibe dia ny tsipiriany rehetra - ny singa rehetra amin'ny akanjo, kiraro, accessories, volo, fitafy ary ny sisa. Ny teny hoe look dia midika hoe olona toa an'io fotoana manokana io, fa ny foto-kevitry ny "sary" dia afaka mitohy mandritra ny fotoana maharitra.
Ireo trano fanao malaza indrindra
Amin'izao tontolo izao dia misy marika marobe marobe, izay samy manana ny mpankafy azy sy ny mpaniratsira. Amin'izao karazana isan-karazany izao dia misy marika tsy fantatra, ary tena gurus, izay renena manerana izao tontolo izao. Mpamorona, manam-pahaizana, olo-malaza eran-tany, solontena avy amin'ireo fianakaviana manan-karena indrindra manerantany ary maro hafa no manangona ny lokon'ny fanehoana marika malaza sy manan-kery ao amin'ny TOP. Amin'izao, ireo marika ambony dia tarihin'ireto anarana manaraka ireto:
Inona no lamaody ratsy?
Ny vehivavy sasany, mieritreritra ny lamaody amin'ny akanjo, milaza fa tsy hanaraka azy velively izy ireo ary hanao ny fomba tiany. Eny tokoa, maro ny fironana amin'izao fotoana izao dia mijery hafahafa, nalaza ary mahafinaritra. Noho izany, eo amin'ny lohan-tsehatra dia ahitanao kiraro izay mifandray amin'ny aretina sy fahasembanana amin'ny orthopedic, ny pataloha sy ny jeans miaraka amin'ny hatsarana tsy misy lanjany, ka mahatonga azy io ho ratsy tarehy sy tsy mendrika, akanjo "amin'ny akanjo" ary maro hafa.
Ny ankamaroan'ireo tovovavy mahita izany voalohany indrindra dia mitranga ny fanontaniana, inona no lamaody ratsy, ary nahoana no ilaina izany. Raha ny zava-misy, tsy misy mpilalao fanao mahazatra izay te hijery tsara, tsara tarehy ary manintona dia tsy mitafy izay tsy hodiany fa kosa mifanohitra amin'izany. Mandritra izany, ny andraikitry ny zavatra toy izany dia ny fanaovana ny sary tsy mahazatra ary manintona ny fifantohan'ny hafa amin'ny tompony. Miaraka amin'izany, izy ireo, tsy isalasalana, mitantana, ary noho izany dia mahazo loka goavana eo amin'ireo vehivavy izay tia manakorontana ny vahoaka .
Fomba mahaliana avy amin'ny tantaran'ny lamaody
Ao amin'ny tantaran'ny lamaody sy ny fomba, afaka mifidy zava-misy mahaliana maro ianao, ohatra:
Modely miverimberina matetika. Ny plagiarisma amin'ny lamaody dia fisehoan-javatra tsy tapaka sy miverimberina. Ny zavatra tsy nitsaha-malaza amin'izao fotoana izao, dia azo jerena indray eo amin'ny lampihazan'ny lamaody ao anatin'ny folo taona vitsivitsy;
ny teny hoe "raglan" dia avy amin'ny anaran'ny "Field Marshal", izay tonga avy amin'io fomba io. Ity lehilahy ity dia namoy ny tanany nandritra ny ady ary naniry ny hanafina ny voka-dratsy ara-batana amin'ny fisarahana tsy mahazatra;
Tamin'ny taonjato faha XV, saika ny vehivavy rehetra tamin'ny lamaody dia nanao akanjo vita amin'ny tratra. Io fomba fijery io no heverina fa lamaody sy mahazaka indrindra. Amin'io tranga io dia heverina ho tsy azo ekena ny soritra na ny tongotra.
Colorotype "mena fahavaratra"
Make up for Halloween Zombies
Retro ny akanjo amin'ny akanjo
Takelaka vita amin'ny akanjo amin'ny akanjo
Ahoana no lamaody?
Photoshoot amin'ny rails
Ahoana no hanavahana ny hoditra amin'ny hoditra?
Spondylarthrosis ny valan-javaboary
Kristi Brinkley dia misy resaka momba ny rain'ny Rahavavy Hadid
Wood holatra - tsara sy ratsy
Resaka tsotra 10 ho an'ny mpitatitra mora vidy
Inona no fifaninanana azo atao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana?
Kendall Jenner ary modely hafa amin'ny fanentanana dokambarotra nataon'ny Martsa LaPerla
Burdock - toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Ny Raincoats Women - Fall 2014
Fanamboarana akanjo - lamaody 2016
Taom-baovao ho an'ny ankizy 2013
Fanolorana ny fasa
Wedding akanjo ho an'ny vehivavy bevohoka - akanjo tsara indrindra ho an'ny brides miaraka amin'ny kibo boribory